- မြန်မာ ဘားမစ်
သူများကလိလို့ မရအောင် Windows Lock ချထားမည်
အခုဒီပိုစ့်လေးကတော့ မိမိကွန်ပျူတာကို သူများတွေ ကလိလို့ မရအောင် windows lock ချနည်းလေးပါ.. ဆော့ဝဲလ်မလိုပါဘူး .. ဝင်းဒိုးထဲမှာပါပြီးသားပါ.. ဒီနည်းလေးက ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်.. မကောင်းလည်း မကောင်းပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မေ့တတ်တဲ့သူများအတွက် မကောင်းပါဘူး ..
ခဏခဏ password မေ့နေရင် ရှော့ရှိပါတယ်.. ကွန်ပျူတာပြင်တဲ့ဆိုင်ကို သွားသွားပြီး password ဖြုတ်ခိုင်းနေရပါလိမ့်မယ်.. ခဏခဏ ပိုက်ဆံကုန်မှာပေါ့ .. ငွေကုန်ပေါက်လေးပါ.. ဒါကြောင့် မေ့တတ်တဲ့သူများ အမေ့သန်တဲ့သူများ windows မှာ password ခံမထားဖို့ ကြိုတင် သတိပေးချင်ပါတယ်..။ password ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မိမိအမြဲ မှတ်မိတဲ့ အသေမှတ်ထားတဲ့ နာမည် ၊ နံပါတ် တခုခုကို ထားစေချင်ပါတယ်.. ဒါမှ ဖွင့်ရလွယ်မှာပါ...။ ကောင်းတာတခုကတော့ မိမိမရှိတဲ့ အချိန်မှာ မိမိကွန်ပျူတာကို သူများတွေ ယူကလိလို့ မရတော့ပါဘူး.. သူတို့သုံးချင်ရင်လည်း ကိုယ့်ကိုအသိပေးပြီးမှ ကိုယ်ဖွင့်ပေးမှ သုံးလို့ရမှာပါ..။ ဒါကြောင့် ဒီတခုတော့ ကောင်းပါတယ်.. နောက်တခုကောင်းသေးတာက ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲကို လူနှစ်ယောက်သုံးယောက် user account ၂ခု ၃ခု ဖွင့်ပြီး သူ့အကောင့်နဲ့သူ ကိုယ့်အကောင့်နဲ့ကို ခွဲသုံးလို့ ရပါသေးတယ်.. သူမအားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်သုံးပြီး .. ကိုယ်မအားတဲ့အချိန်မှာ သူသုံးတာမျိုးပါ..။ ကိုယ့်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဖိုင်တွေကို သူမသိနိုင်ပါဘူး.. သူ့ရဲ့ဖိုင်တွေကိုလည်း ကိုယ်ကြည့်လို့ မရပါဘူး.. ဒီပိုစ့်မှာတော့ အကောင့်တစ်ခုထည်းပဲ ဖွင့်ပြထားပါတယ်.. စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်ကပုံတွေကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ.. မိမိထည့်တဲ့ password မမေ့ဖို့ အထူးသတိပြုပါ.. windows lock ချတဲ့ ကီးဘုတ် ရှော့ကပ်ကီး ကတော့ Windows + L ကီးနှစ်လုံးတွဲနှိပ်ပါ..။
Windows Lock ချနည်းကို ဒီအောက်က ပုံတွေကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ.. ပထမဆုံး User Account ကိုအရင်ရှာပါ..
မေ့တတ်သောသူများ ဒီနည်းကို မသုံးကြပါနှင့် .. အရင်ကျနော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် Gmail Account ဖွင့်ချင်တယ်ပြောလို့ သူ့ကို သူ့ရှေ့မှာတင် ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်.. နောက်တနေ့ကျတော့ ကျနော့်ဆီကို ပြန် ရောက်လာပါတယ်.. သူ့Gmail Account ဝင်မရတော့လို့တဲ့.. ဘာဖြစ်လို့လဲ သေချာမေးကြည့်တော့ password မမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့.. ကျနော်လည်း အများကြီး မပြောတော့ပါဘူး .. နောက်အကောင့်တခု ထပ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒါကြောင့်မေ့တတ်တဲ့သူများ ဒီပိုစ့်မှာ တင်ထားတဲ့နည်းကို မသုံးကြဖို့ အကြံပြုချင် ပါတယ်.. ခင်ဗျား......
Windows password ကိုသူများပြောင်းမရအောင်
Window password ကိုသူများပြောင်းလို့ မရအောင်လုပ်နည်း လေးပါကွန်ပျူတာကို password
၄၊ အဲဒီ box ရဲ့ Local Computer Policy အောက်က User Configuration
၅၊ User Configuration ရဲ့အောက်မှ Administrative Template ဆိုတာလေးကို double
click ပေးပြီသူ့ရဲ့အောက်က system ဆိုတာလေးကို double click ထပ်ပေးလိုက်ပါ။
၆၊ ပြီးရင်တော့ ညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ setting ရဲ့အောက်က Ctrl +Alt +Del ဆိုတာလေးကို
double click ပေးပြီဝင်လိုက်ပါ။
၇၊ အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရတဲ့ Remove change password ကို
double click လုပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ။
၈၊ အဲဒီမှာ Remove Change Password Properties ဆိုတဲ့
၉၊ အဲဒီ box ရဲ့ setting ထဲက Enable ဆိုတာလေးကိုအမှန်ခြစ်လေးပေးပြီး apply , ok
ပေးလိုက်ရင် သူငယ်ချင်းကွန်ပျူတာ ပိုပြီးတော့စိတ်ချရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်
အဆင့် (၁) အနေနဲ့ကတော့...............
ကဲစမယ်ဗျာ..... ပထမဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ Start ကနေ ဖြစ်ဖြစ် Win + R ကိုဘဲ တွဲကလစ်လစ်
run box ကိုခေါ်လိုက်ပါနော်.. အဲကျလာတဲ့ ဘောက်ထဲမှာ regedit ဆိုတာလေးထည့် enter (သို့)
အိုကေ အဲလို ခေါ်လိုက်တာနဲ့ regedit ဆိုတဲ့ ဇယားကြီးတစ်ခုကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်...ကြည့်လိုက်ပါ
အတိုခေါက်အနေနဲ့ ( HKCU/Control Panel/Desktop ) ပါ...
ပုံသေးနေရင် ကလစ်လိုက်ပါနော်...ဒါပေမယ့် သည်လို အစဉ်လိုက် သွားပေးပါ လွယ်ပါတယ်....
HKEY-CURRENT-USER ဆိုပြီးရှိမယ် အဲတာကို ကလစ်ပါ...နောက် သူ့အောက်က..ပေါ်လာမဲ့
Contro Panel နောက် ထပ် Desktop ဆိုပြီး တဆင့်ခြင်းနံပါတ်လေးတွေပြထားသလို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးတာနဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ MenuShoeDelay ဆိုတဲ့စာတန်းလေးရှာပါ တွေ့တာနဲ့ Double ကလစ်ပေးလိုက်ပါ ဘောက်သေးသေးလေးကျလာမယ်.. ကျလာတဲ့ဘောက်ထဲက Value data နေရာက
နံပါတ်ကို ဘာဘဲ ကျလာလာ (0)..သုည ဟုပြောင်းပေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ...နော်
အဆင့် (၂) အနေနဲ့ကတော့...အောက်မှာ ဆက်ကြည့်ပါ.. သည်နေရာကဘဲ ပြန်စမှာဖြစ်ပါတယ်..
regedit ဇယားကြီးကို မဖျက်လိုက်ပါနဲကနော်..အဲထဲကဘဲဆက်သွားမယ်....
အတိုခေါက်အနေနဲ့ကတော့ ( HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Control ) ပါ။။။
HKEY-LOCAL-MACHINE ဆိုပြီးရှိမယ် အဲတာကို ကလစ်ပါ...နောက် သူ့အောက်က..ပေါ်လာမဲ့
Syatem နောက် ထပ် CurrentControlSet နောက် Control ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိသော”Wait
toKill Services TimeOut”ကလစ်ပေးလိုက်ပါ ( နှစ်ချက်ကလစ်ပါ)
ဘောက်သေးသေးလေးကျလာမယ်.. ကျလာတဲ့ဘောက်ထဲက Value data နေရာက
နံပါတ်ကို ဘာဘဲ ကျလာလာ ( 50 )..ငါးဆယ် ဟုပြောင်းပေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ...နော်
အဆင့် (၃) အနေနဲ့ကတော့ ဆက်လက်ကြည့်လိုက်ပါနော်...
အတိုခေါက်အနေနဲ့ကတော့ ( HKEY-USER/S-1-5-19/Control Panel/Desktop )
HKEY-USER ဆိုပြီးရှိမယ် အဲတာကို ကလစ်ပါ...နောက် သူ့အောက်က..ပေါ်လာမဲ့
S-1-5-19 နောက် ထပ် Control Panel အဲနောက် Desktop တဆင့်ခြင်းနံပါတ်လေးတွေပြထားသလို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ
အပေါ်ကပြထားတဲ့အတိုင်း HKEY-USER/S-1-5-19/Control Panel/Desktop ကိုလုပ်ခဲ့သည်လိုဘဲ...
S-1-5-19 ရဲ့အောက်မှာကျန်နေသေးတဲ့ S-1-5-20 ကိုလည်းပဲ အလားဆူ လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ
ကဲ ဗျာ...ပီးသွားရင်တော့ Registry ထဲမှာ အနည်းငယ်လုပ်ပီးသွားပြီလို့ ဆိုရမယ်ဗျာ..…ကျွန်တော်တို့Window7မှာတော့ Registry
ပိုင်းကို အများကြီးလိုက်ပြင်ပေးစရာမလိုပါဘူး အကယ်လို့ သင်ဟာ WindowXP User ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး များမယ်ထင်တယ်..နော်...
=Computer အတွက်လုပ်သင့်သော နည်းလမ်းများ (၂)
=Computer အတွက်လုပ်သင့်သော နည်းလမ်းများ (၃)
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်... လိုအပ်တာများရှိပါက.. C-Box မှာပြောခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်... အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ကူညီ မျှဝေသွားပါမည်... ဘလော့ခရီးသည်နေရာလေးများ
အင်တာနက်သုံးသော သူငယ်ချင်းတိုင်း မရှိမဖြစ်လို့ အပ်မယ့်Internet Download Manager 6.14 Build 5
ဗားရှင်းအသစ်လေးပါ။အင်စထော လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးနဲ့ crack ဖိုင်ထည့်နည်းလေးကိုမသိသေးသော သူငယ်ချင်းများအား နည်းနည်းပါးပါးလောက် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
မိမိ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားပြီးသော IDM ဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပါ.....
အောက်ဆုံးမှာရှိနေသော idm exe လေးကို mouse ရဲ့လက်ညိုးခလုတ် left click ဖြင့် desktop မျက်နှာပြင်
ပြီးလျှင် အနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ပထမအစဖွင့်သော idmဖိုင်လေးကို နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
Finish ဆိုတာလေးပေါ်လာလျှင် မနှိပ်နဲ့ အုံး။Crack ဖိုင်လေးကို အရင်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်လို့ 
My Computer ထဲမှ Local Disk (c)ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။
Prrogram File ကိုဖွင့်ပါ..
Internet Download Manager ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ......
မိမိ Desktop အပေါ်သို့ ဆွဲတင်ထားသော IDM CRACK ဖိုင်လေးကို copy ပြီးထည့်လိုက်ပါ။
ရှိပြီးသား ထပ်ထည့်မလားလို့အင်္ဂလိပ်စာတန်းလေးပေါ်လာလျှင် Yes ကိုရွေးနှိပ်ပါ။အခုနက
ထည့်ထားသော IDM CRACK ဖိုင်လေးကို နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး (Run )လိုက်ပါ။
Finish ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။
မသိသေးသော သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေပါစေ။
Maxthon software လေးကိုကျွန်တော်ဒေါင်းခဲ့ပါတယ် ပြီတော့ install လုပ်ခဲ့ပါတယ်
အဲမှာ ပြဿနာကစဒါဘဲ install လုပ်လိုပြီးဆုံးခဲပါတယ်အောက်ကပုံအတိုင်းဘဘဲ
ဒါပင်မဲ့ ဘယ်လိုမှဖွင့်မရဘူးဖြစ်ခဲတယ် right chick ထောက်ပြီး အမျိုးမျိုးဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်မရခဲ့ဘူး
ဘာအကြောင်းပြချက်မှာလဲမပြောဘူး အဲ့မှာ ငရဲသားဆိုဒ်ကနည်းပညာလေးကို အခြေခံပြီး နည်းပညာလေးတစ်ခုရခဲ့တယ် သိပြီးသားသူတွေနဲ့ဆရဆရာတို့ အတွက်တော့ရယ်စရာပေါ့ နော် ဒါပင်မဲ့ မသိသေးတဲ့သူတို့ အတွက်ရည်ရွယ်ဒါပါ။ ဒါပင်မဲ့ software တိုင်းကိုပြောဒါမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ software ပြဿနာလိုဆိုရမှာပေါ့နော် ကဲ့အပိုမပြောဘဲ လက်တွေအသုံးပြုကရအောင်
အဲဒီ Desktop ပေါ်က ဘယ်လိုမှာဖွင့်မရတဲ့ Maxthon software လေးကို right chick ထောက်ပါ
အဲမှာ Properties ဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ box လေးပေါ်လာပါမယ်
အဲ့ box လေးက Open File Location လေးကိုနိပ်လိုက်ပါ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းရောက်သွားပါမယ်
အဲပုံကအတိုင်း Maxthon.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်းလေးကို copy ကူးလိုက်ပါ နော်ပြီးရင်အဲ့ထဲမှာဘဲ paste လိုက်ပါ
Maxthon - copy.exe ဆိုဒါလေးရပါမယ် အဲဒါလေးကို Maxthon.exe လိုအမည်ရေပြောင်လိုက်ပါ အဲဒီမှာ အောက်ကပုံအတိုင်း box လေးကျလာပါမယ် yes ကိုနိပ်လိုပ်ပါ
အောက်ကပုံအတိုင်း Maxthon (2) .exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်းလေးတစ်ခုရလာပါမယ် ဒါဆိုရင်
Maxthon (2) .exe ဖိုင်အောက်က Maxthon.exe လေးကို Delete လုပ်လိုက်ပါ
Maxthon (2) .exe ဖိုင်လေးကို Open လုပ်လိုက်တော့ရပါပြီ အရင်ကဘယ်လိုဖွင့်ဖွင့်
ဖွင့်မရခဲ့ပင်မဲ့ အခုတော့ဖွင့်လိုရပါပြီ ဒီနည်းအတိုင်းဘဲ ဖွင့်မရတဲ့ Internet Download Manager ကိုလဲ
ကျွန်တော်ဖွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတိုလဲ ဘာ box မှာမပေါ်ဘဲ ဖွင့်မရတဲ့ softawre တွေက်ို ဒီနည်းလေးနဲဖွင့်နိင်ရနိင်ကျပါစေလို ဆန္ဒပြုပါတယ်
တစ်လက်စထည့် အဲဒီ Maxthon (2) .exe ဖိုင် လေးကို Desktop မှာထားမယ်
Maxthon (2) .exe right chick ထောက်ပါ အဲဒီမှ create shortcut ဆိုဒါလေးကိုနိပ်လိုပ် အောက်ကပုံအတိုင်း shortcut မြှားလေးနဲ ဖိုင်ပေါ်လာရင် copy ကူးပြီး Desktop မှာ paste လိုက်ပါ
ပြီးရင် copy ကူးခဲ့တဲ့နေရာက Maxthon (2) .exe ဆိုတဲ့ shortcut မြှားလေးနဲ ပါတဲ့ဖိုင်ကို Delete လုပ်လိုရပါတယ်.. .
အားလုံးအဆင်ပြောပါစေလို မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတိုကို ခင်မင်လေးစားလျှက်
Computer Memory ကို Software မသုံးဘဲနဲ့ ဘယ်လိုပေါ့အောင်လုပ်မလဲ?
ကွန်ပျူတာစဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပြန်ကြားပေးရတဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေထဲမှာ Memory ဟာ ထိပ်ဆုံးကဖြစ်ပါတယ်..ကွန်ပျူတာမှာ Software , Games , Firefox ,chrome အစရှိသည်တို့ကိုအလွန်အကျွံဖွင့်ခြင်းကြောင့် Memory နေရာယူမှုအလွန်တိုးပွားလာပြီး
စက်လေးသွားခြင်း..လုံးဝထိုးရပ်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်..ဒီလို မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေး
( 1 ) Notepad ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
(2) FreeMem=Space(10240000000) <= ပန်းရောင်ပြထားတဲ့ ကုဒ်လေးကို Notepad ထဲသို့ကော်ပီကူး
လိုက်ပါ..မှတ်ချက် .. အခုပြထားတဲ့ ကုဒ်သည် 1GB RAM အတွက်ဖြစ်ပါတယ်.. မိမိ RAM က2GB ဆိုရင်
1024 နေရာမှာ 2048 လို့ပြင်ပေးလိုက်ပါ...အကယ်လို့ မိမိရဲ့ RAM က 512 MB ဘဲရှိတယ်ဆိုရင်
1024 နေရာမှာ 512 လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ 512 MB + 512 MB = 1 GB ( 1024 MB )
(3) ပြီးတာနဲ့ Save လုပ်ပါမယ်..Save လုပ်တဲ့အခါ freememory.vbs ဆိုပြီး အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေရာရာမှာ
Save လုပ်ပေးလိုက်ပါ..မိမိအသုံးပြုနေစဉ် Memory မနိုင်တော့လို့စက်လေးလာတဲ့အခါတိုင်း..သုံးလက်စ
Android ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ကို Desktop Computer ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ပထမဆုံး အသုံးပြုမဲ့ User ရဲ့ Phone အမျိုး အစားကာ Android v.2.2 အထက်ဖြစ်ရ ပါမယ်။ နောက် အင်တာနက် လိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းလဲ ဖြစ်ရ ပါမယ်။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ ပုံအတိုင်း ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
(1) ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
(2) ပြီးရင် Wireless & Network ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
(3) ထိုမှ တဆင့် Tethering and portable hotspot ရှာပြီးထပ်မံ နှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံပါအတိုင်းတွေ့ရပါမည်။
(4) ဖုန်းရဲ့အားသွင်းတဲ့ USB ကြိုးဖြင့် ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်ရန် USB tethering ကို အမှန်ခြစ်လုပ်ပေး ရပါမည်။
(မှတ်ချက်။ usb cable ကြိုးဖြင့်မချိတ်ဆက်ခင် usb tethering တွင် အမှန်ခြစ်လုပ်လို့မရပါ။ ထိုကြောင့် phone usb cable ကြိုးကို ကွန်ပျူတာ၏ usb ပေါက်တွင်ထည့်ပြီး လုပ်ကြည့်ရန်)
ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Wireless & Network ကိုရှာပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။
ထိုမှ တဆင့် Tethering and portable hotspot ရှာပြီးထပ်မံ နှိပ်လိုက်ပါ။
USB Cable ကြိုးနှင့် ကွန်ပျူတာ မချိတ်ဆက်မီ တွေ့မြင်ရပုံ
(မှတ်ချက်။ usb cable ကြိုးဖြင့်မချိတ်ဆက်ခင် usb tethering တွင် အမှန်ခြစ်လုပ်လို့မရပါ။ ထိုကြောင့် phone usb cable ကြိုးကို ကွန်ပျူတာ၏ usb ပေါက်တွင်ထည့်ပြီး လုပ်ကြည်ရန်)
USB Cable ကြိုးနှင့် ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ပြီး တွေ့မြင်ရပုံ
USB ကြိုးဖြင့် ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်ရန် USB tethering ကို အမှန်ခြစ်လုပ်ပေးရပါမည်။
အားလုံး ချိတ်ဆက်ပြီးရင် အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်ပေးဖို့ Date Service is disabled ကို Enable လုပ်ပေးပါ။
Data Service is Enabled လုပ်ပြီးနောက် 3G Network တက်လာပြီး အင်တာနက်စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
အထက်ပါ လုပ်နည်းအတိုင်း Laptop ကွန်ပျူတာဖြင့်လဲ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ ကြိုးမဲ့ Portable Wi-Fi hotspot ဖြင့် အသုံးပြုပါလို့လဲ ရပါသည်။ udb tethering ကို အမှန်ခြစ်မပေးပဲ Portable Wi-Fi hotspot ကို အမှန်ခြစ်ပေးခြင်းဖြင့် ကြိုးမဲ့ Wi-Fi ကို ဆက်ချိတ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆင်မပြေရင် comment လေးရေးခဲပါအုန်း
★ဘလော့မှာ HTML COLUR CODE ဘောက်လေးထားချင်ရင်
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ့တော့ Bolgger ချစ်သူတွေအတွက် HTML COLOUR CODE ဘောက်လေးကို ပြန်လည်ဝေမှာလိုက်ပါဗျာ ဒီ HTML COLOUR CODE ဘောက်ရဲ့ထူးခြားခ...
မိမိ Bogger ပေါ်မှာရောင်ပြန်ထွက်နေတဲ့ဘုရားပုံများထားချင်ရင် မင်္ဂလာပါဗျာ Bolgger ချစ်သူတွေအတွက် နောက်တစ်ခုလာပြန်ပြီး မိမိဘလော့ဂါပေါ်မှာ ကြ...
★Andriod ဖုန်းပေါ်မှာ အပျင်းပြေမြန်မာကျားထိုးကြမယ်
ကျွန်တော်မြန်မာကျားလို့ပြောတာကကျန်တဲ့ကျားတွေရှိလို့ပေါ့နော်...ကျွန်တော်က ကျားကစားရတာဝါသနာပါတော့ သတိရတိုင်း အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာကြည့်တယ် .....
★screen အလန်း သုံးချင်သူတွေအတွက် (502.66kb)
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပျုတာ Screen ကို အသဲပုံလေး ပန်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ကြည့်ရအောင်နော် စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် စမ်းသပ်ကြည့်နော် အရမ်းလှတာ ထက...
★ဘောလုံး FIFA 10 for pc game
PC အတွက် ဘောလုံး game လေးပါ လိုချင်ရင်တော့ ဒေါင်းလိုက်ပါနော် လှိုင်းကောင်းမှာရမှာနော် size (2.16 GB) ရှိပါတယ်
★Window7ISO Software Update free download
သူငယ်ချင်းတွေ ကွန်နက်ရှင် အခတ်ခဲကြောင့် Window7ISO ကို လိုချင်ရက်နဲ့ ဖိုင်ဆိုက်ဒ် ကြီးနေလို့ လက်လျှော့ နေသူများအတွက်ပါ....။ ကျနော် ...
★ နွေကကြိုးကဗျာ(သင်္ကြန်သီချင်းအသစ်များ)အပိုင်း(၁) အပိုင်း (၂) (2014)[Album]MP3
VA - နွေကကြိုးကဗျာ(သင်္ကြန်သီချင်းအသစ်များ)အပိုင်း(၁) ၀၁ ပြည်လမ်းက ရေနန်းသဘင် - အလင်္ကာဝတ်ရည်အဖွဲ့ Download ၀၂ ပျော်ရ...
★internet မှာငွေရှာခြင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အွန်လိုင်း ပေါ်မှာငွေရှာခြင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ငွေရှာရန်ဆိုဒ်လေး တစ်ဆိုဒ်ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ် ဒီဆိုဒ်လေးက စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိတယ် g...
★ ပြက္ခဒိန်နော်ခံပုံထည့်မယ် လိပ်စာကတ်လုပ်ဖို.. Card Design လေး
Support : Video Designer © 2017. မြန်မာ ဘားမစ် - All Rights Reserved